मनोवाद Archives - Kavyalaya - काव्यालय
द प्रोफेट पढ्दै छु । खलिल जिब्रानको रौली एकदम प्रिय लाग्छ । द प्रोफेट पछि न्युयोर्क सनले छापेको खबर ‘द प्रोफेट इज डेड’ पनि पढ्नु पर्ने छ । तर अहिले…
by जे एन दाहाल ३१ साउन २०७७
कुनै पनि कार्य गर्ने अघिल्लो दिन एउटा कल्पना हुन्छ। यहाँलाई पनि हुँदो हो, मलाई पनि हुन्छ। यो अमेरिकाबाट एक देश एक महादेश सम्मको काल्पनिक यात्रा हो जुन पछि साकार पनि…
जुनेली रात , चिसो बतास अनि “एक प्यारका नग्मा” गीतको भाव ! म कतै हराइसकेकी थिएँ । त्यो विशाल आकाशमा म कतै पखेटा फिँजाएर उडिरहेकी थिएँ । शरीर त यहीँ…
by rajujhallu ३ साउन २०७७
“सिगरेट जलिरहेको छ ! मैले एक सर्को लिएँ ! क्रमश: अर्को र फेरी अर्को ! मानौँ यो धुवाँ मेरै शरीरबाट उडेको हो ! मानौँ यो धुवाँ मेरै फोक्सो जलेर निस्किएको…
थ्याङ्क यू कोरोना
by ozonebabu ८ चैत्र २०७६
कोरोना शरणम गच्छामी ! भन्दै यो लेख्न बसेको कुरा ब्ल्याक कफीको प्रमिस साचो हो । इन्सुरेन्सबाट त्यै दुई आउँछ । ऋण हिसाब गर्दै जाँदा एघार नाघेको देखेर कोरोना ‘दि कोभिड–…